Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Kenya njem akụkọ » Kenya Airways ụgbọ elu London gara aga
Akụkọ ụgbọ elu • Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu • News na ụgbọ elu • etn • Feature Nkeji edemede • Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa • Kenya njem akụkọ • iwughachi • Tourism • Akụkọ gbọ njem • Travel • Njem njem • Akụkọ njem • Nchedo njem na Mberede • Akụkọ Njem UK
Kenya Airways na-efe ụgbọ elu ikpeazụ ya na United Kingdom taa, na-etinye onwe ya iji merie oge ndụmọdụ ndụmọdụ njem na-amalite na Fraịde a.
UK nyere ndụmọdụ maka njem ma agaghị anabata ndị mba ọzọ si ma ọ bụ site na Kenya malite Eprel 9.
Iji mezuo ọchịchọ dị ukwuu maka njem tupu ndụmọdụ ahụ eme, Kenya Airways agbakwunyela ụgbọ elu ndị na-alọghachite.
Ndị ahịa nwekwara ike ịgbanwe ntinye akwụkwọ maka njem ọzọ ma ọ bụ rịọ nkwụghachi na enweghị ntaramahụhụ.
Bịa na Tọzdee ugbu a Kenya Airways ụgbọ elu London gara aga ga-eme mgbe ị gbakwunyechara ụgbọ elu nnabata 2 iji gboo ọchịchọ dị ukwuu maka njem na UK tupu ndụmọdụ njem njem nke izu gara aga wepụtara na Fraịde a.
"N'ihi nnukwute ọchịchọ maka njem na UK tupu ndụmọdụ ahụ amalite na Eprel 9, anyị atụkwasịla ụgbọ elu ọhụrụ abụọ na Eprel 2 na 4," gụrụ nkwupụta sitere n'isi ụlọ ọrụ ụgbọelu ahụ n'isi obodo Kenya na Nairobi.
Site na Eprel 9, UK agaghị anabata ndị mba ọzọ na-eme njem site ma ọ bụ site na Kenya gaa n'ọdụ ụgbọ elu ya, gụnyere ndị njem na-agafe agafe bụ ndị nwere ike ịgafe naanị Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) na Nairobi.
Ndị na-ahụ maka ụgbọ elu ahụ kwuru, sị: “Ndị ahịa nke iwu a nyere nwere ike ịgbanwe akwụkwọ ha gbara maka njem ọzọ ma ọ bụ rịọ ka a kwụghachi ha niile.
Kenya Airways na-eje ozi na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Africa na mpaghara Central African steeti na agwaetiti ndị dị na Eastern Rim nke Indian Ocean.